यदि यो बनियान छैन कुनै पनि महिलाको दराज हुन पूरा हुनेछ। को बनियान जस्ता विवरण संग महिला प्रतिनिधि को उमेर को बिना कौशलतासाथ तिनीहरूको बलियो पक्ष कमीकमजोरी, कुनै पनि यदि जोड र लुकाउन। एक बुनाई ढाँचाको सबै समय मा फैशन छन्। आकारहरू र ढाँचाको विविधता कुनै पनि outfit एक अद्वितीय र स्टाइलिश बनाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैले जहाँ सुरु गर्न गरेको बुझ्न गरौं बुनाई वास्कट बालिका लागि।
मोडेल को विकल्प र आवश्यक सामाग्री
गर्न पहिलो कुरा - तपाईं बताउन जाँदैछन् भन्ने मोडेल चयन गर्नुहोस्। यस पछि तपाईं यार्न र हटाउने yardsticks को चयन गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। थ्रेड गुणस्तर मोडेल मा निर्भर गर्दछ। यो गर्मी संस्करण हो भने - प्राकृतिक सामाग्री (कपास, बांस र सन) चयन गर्नुहोस्, र बनियान जाडो लागि डिजाइन गरिएको छ भने - ऊन र ऊन मिश्रणों को पनि उपयुक्त एक्रिलिक यार्न छन्।
के माप आवश्यक छन्, पनि, यसलाई भविष्यमा वास्कट को शैली मा निर्भर गर्दछ। परंपरागत, यो नितम्ब वा कमर को armhole चौडाइ र girth को लम्बाइ छ।
बनियान बालिका लागि spokes
का एक केटी, र त्यसपछि थप जटिल लागि एक सरल बुनाई ढाँचा हेरौं। फोटो धेरै सजिलै फिट कि वास्कट एउटा उदाहरण देखाउँछ।
हामी बुनाई सुई मा लूपहरूको एक सेट सुरु, संख्या छाती अन्तर्गत आधा मंडल अनुरूप गर्नुपर्छ। यसलाई फिर्ता हुनेछ। प्रदर्शन जुवा कुनै पनि इम्बोस गरिएको बाक्लो वा filigree ढाँचा हुन सक्छ। यदि यो तपाईं को लागि कठिन छ, तपाईं एक अगाडि कढाई वा रबर ब्याण्ड बुनना गर्न सक्नुहुन्छ। घटाउ गर्न नभुल्नुहोस्, को armholes पुग्नु र घाँटी कटौती। कि पछि तपाईं अलग प्रत्येक काँध समाप्त गर्न आवश्यक छ।
बायाँ र दायाँ - समतल दुई लिङ्क गर्न आवश्यक छ। अब काँध र पक्ष seams सी, र त्यसपछि समय समयमा वर्दी वृद्धिमा प्रदर्शन, लामो सुई र बुनना दोहोर्याउन rises उत्पादन को तल मा, इच्छित लम्बाइ सम्म। तपाईं अधिक थपिएको, अधिक रसीला को बनियान को कम भाग प्राप्त।
बनियान तयार भएपछि, यो शेल्फ किनारा, एक घाँटी र तल उत्पादन बाँध आवश्यक छ, उदाहरणको लागि, कला "rachy चरण" वा "खोल", र अगाडि भाग मा एक हुक आवश्यक एक सजावटी बांधनेवाला जारी छ। यो साटन रिबन, laces वा बुना सुन्दर बटन हुन सक्छ। Buttonholes हुक प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब तपाईं बालिका लागि टाई बनियान धेरै सजिलै कुरा थाह छ।
आभूषण संग बालिका लागि बनियान
अर्को मोडेल sleeveless क्लासिक शैली र जटिल ढाँचा बुनाई समावेश छ। फोटो जातीय शैली मा एक धेरै उज्ज्वल वास्कट एउटा उदाहरण देखाउँछ।
turtleneck, जीन्स वा स्कर्ट संग यस्तो सम्भव संयोजन लगाएका। उनको बुनाई लागि, तपाईं यार्न को remnants विभिन्न प्रयोग वा भण्डारमा चाहेको रंग छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। रंग को एक ठूलो विविधता संग मुद्दा को 50-ग्राम skeins किन्न सर्वश्रेष्ठ छ। यस्तो बनियान, सम्बन्धित केटी कुरा आवश्यकता बढी समय, अघिल्लो संस्करण भन्दा शुद्धता र लगनशील भई लागिरहेमा।
सिलाइ बुनाइ पनि फिर्ता देखि सुरु। को armholes सम्म पुग्ने, घटाउ गर्न, र त्यसपछि घाँटी कटौती र अलग प्रत्येक काँध समाप्त। त्यस्तै भ्क्याल बुनना। को बांधनेवाला एक बनियान छ देखि उदाहरणमा, त्यहाँ दुई हुनेछ। तर तपाईं मोडेल र बटनहरू बिना टाई गर्न सक्नुहुन्छ। मोडेल भनेर याद jacquard ढाँचाको थप बाक्लो र कम तानेर छन्। तसर्थ, माप लिएर, एउटा सानो मार्जिन बनाउन। सबै भागहरु लिङ्क गरेर, काँध पहिलो, त्यसपछि पक्ष seams सी। एक हुक वा सुई संग किनाराको ट्रिम प्रदर्शन। सबै - बालिका लागि बनियान spokes जडान! खुशी संग लगाउने।
बुनाई वास्कट महिलाहरु को लागि
धेरै आफ्नो छोरी र granddaughters नयाँ कुरा बुनना, तर पनि आफूलाई भूल हुन हुँदैन बारेमा खुसी राम्रो। आखिर, आफ्नो दराज बनियान हुनेछ मा भने, तपाईंको आफ्नै हातले बनाएको, तपाईं मात्र होइन हेर्न सुन्दर र स्टाइलिश छौँ, तर पनि तपाईंको सक्षम हात विषयमा आफ्नो ठेगाना मा compliments धेरै सुन्न। म यो धेरै राम्रो छ भनेर सहमत हुनुहुन्छ। गरेको शुरुआती सजिला मान्छे को लागि बुनाई सुई वास्कट संलग्न केही विकल्पहरू हेरौं।
यस्तो बनियान, फोटो जस्तै, एक क्लासिक शैली छ, र यो बुनना पर्याप्त सजिलो छ। त्यो, यो चिल्लो सतह को सामने चल्छ एक राउन्ड neckline र तखता मा एक जिप छ। यो मोडेल बुनाई तपाईं यार्न, सुई र बटनहरू को लगभग4skeins आवश्यक छ।
एक आभूषण संग अघिल्लो embodiment समान को बनियान को योजना बुनाई। मुख्य कुरा आकार संग गलत छैन गर्न सकिन्छ। यसो गर्न, तपाईं ढाँचा वा तपाईं कुनै पनि राम्रो बैठक, कुरा दराज देखि को लागि एक मोडेल रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिम घाँटी, armholes र तल उत्पादन SC बिना स्तम्भहरू धेरै पङ्क्तिहरू लिङ्क गरेर गर्न सकिन्छ।
तपाईं को लागि विकल्प प्रदर्शन गर्न गाह्रो clasp भने, यो एक सिमुलेशन गर्न सम्भव छ। बीचमा समतल टाई पट्टी garter सिलाई यो र त्यसपछि यसलाई बटन सी गर्न।
महिलाहरु को लागि लामो बनियान
महिलाहरु को लागि अर्को विकल्प वास्कट लम्बाइ र ढाँचा भिन्न। तस्विर खैरो मा मोडेल देखाउँछ।
अब मात्र र दर्ता फास्टनरों बिना अघिल्लो मोडेल जस्तै तरिकामा यसलाई फिट। यो बनियान लागि ढाँचा नाजुक चयन गर्न राम्रो छ। यसले एक Lightness र airiness दिनेछु। रंग कुनै पनि मुद्दा सनी, कपास वा बांस हुन सक्छ। धेरै राम्रो, यो मोडेल साँघुरो सुरुवाल र contrasting एक टी-शर्ट वा भिन्न टोन रंग संग संयुक्त देखिन्छ।
बच्चाहरु को लागि मोडेल
हाम्रो युवा महिलाहरु पनि, माथि पोशाक प्यार, र यदि यो न्यानो र आरामदायक बनियान हुनेछ आफ्नो लुगा लाभ हुनेछ।
उदाहरणका लागि, फोटो मा जस्ता। न्यानो वसन्त दिन सुन्दर सांझ लागि वा गर्मी लागि एक मोटी वा फ्लफी यार्न को हुड एक उज्ज्वल र स्टाइलिश बनियान सम्बद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
Textured यार्न नै पहिले नै त बुनाई ढाँचा प्रयोग आवश्यकता छैन, एक विशेष शैली सिर्जना गर्छ। को अगाडि सतह वा garter पर्याप्त हुनेछ। यो बनियान सार्वभौमिक केटी कुरा छ। यसको तटस्थ रंग पूरा र एक जिप बांधनेवाला, टाई, र केटा को लागि यो सक्छन् रूपमा प्रयोग पछि।
कृपया याद गर्नुहोस् कि यो मोडेल अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई जस्तै तरिकामा निर्मित गर्न सकिन्छ। एक विशिष्ट सुविधा हुड छ। तर उहाँले तपाईं विनिर्माण मा समस्या दिन छैन।
वास्कट लागि बुनना हुड
यो एक साधारण आयत जसको लामो पक्ष घाँटी cutout (र backrest र तखता) को कुल लम्बाइ बराबर छ। यो एक पक्ष घाँटी संलग्न छ, र अन्य आधा जोडेको र stapled छ। लोचदार ब्यान्ड को नि: शुल्क किनारा सम्बन्धित वा अन्य कुनै पनि समाप्त गर्न सकिन्छ। एक बांधनेवाला बटन, zippers वा सजावटी buckles प्रयोग गर्न सकिन्छ रूपमा। बच्चा धेरै समय र प्रयास बिना बोले लागि भनेर बनियान बनेको छ।
सानो fashionistas लागि वास्कट
तर बच्चा बालिका लागि मोडेल को विवरण। यो माथि वर्णन योजना द्वारा बुना छ, तर पछाडि एक काँध अब गरिनु पर्छ। buttonholes आकर्षित गर्न आफ्नो आवश्यकता को अन्त मा। र बेल्ट सम्मिलित साटन रिबन वा बेल pompons संग बुना। यो प्यारा र धेरै स्टाइलिश देखिन्छ।
फोटो बालिका लागि बुना बनियान, spokes चिसो प्यास्टेल धर्काहरू मा अगाडि कढाई गरे देखाउँछ। तपाईं विभिन्न रंग र आभूषण, मोनोक्रोम चयन वा राहत ढाँचा संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एक बनियान लागि समय एकदम बिट जाने, तर परिणाम पक्कै पनि तपाईं र अरूलाई खुसी हुनेछ।
किशोर विकल्प। सुशील र आधुनिक
किशोर पनि फैशन वास्कट प्रेम। निस्सन्देह, तिनीहरूलाई लागि मोडेल को विकल्प धेरै ध्यान दिएर नजिक हुनुपर्छ। कि विकल्प तपाईं कसरी रुचि हो? छोटो, हुड संग बोलेरो बनियान जस्तै। त्यो किशोरीले प्रेम हुनेछ। यसलाई मा, त्यो, मूल स्टाइलिश र लाभदायक अडान भीड बाहिर हेर्न हुनेछ।
Crochet रूपमा अघि नै योजना प्रयोग गरेर। हुड अलग गर्न सकिन्छ, र तपाईं neckline मा एक पाश टिप्न र बनियान एक कपडा बाँध गर्न सक्नुहुन्छ। बकसुआ, को सुट ठूलो बटन वा अन्य सजावटी तत्वहरूका लागि रूपमा। खेल-शैली वा आकस्मिक शैली मा सबै भन्दा राम्रो कुरा एक ट्यांक शीर्ष लगाउने। उदाहरणका लागि, एक शर्ट र जिन्स वा टी-शर्ट र छोटकरीमा लागि। रंग संयोजन फरक हुन सक्छ। मोनोक्रोम बनियान संग फोटो को रूप मा, उदाहरणका लागि, एक रंग शर्ट लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ - एक पिंजरे मा। र तपाईं बनियान जडान यदि यो एक उज्ज्वल रंग, तटस्थ छ प्यास्टेल रंग , यो संग संयुक्त मात्र लाभ उठाउन सक्छौं। तर यो भविष्यमा Mistress sleeveless को इच्छित छाया बारेमा सोध्न सर्वश्रेष्ठ छ। उनको इच्छा सुनेर पछि, यो एक छोरी वा नातिनी खुसी पार्न सजिलो हुनेछ। आखिर, फरक पुस्ताका स्वाद प्राथमिकताहरू अधिकांश मेल खाँदैन।
के क्रिसमस tablecloths सबैभन्दा सुन्दर?
क्रस-सिलाई, "बिरालो" योजना - सबैभन्दा लोकप्रिय र सुन्दर
नयाँ वर्ष को अघिबाटै जान्ने काम मा: आफ्नै हातले नयाँ वर्षको संरचना
Turkestan को विकास
Mexicana Resort Sharm4* (मिश्र / Sharm एल शेख): फोटो, समीक्षा
को दाता हुनुहुन्छ? तिनीहरू बन्न सक्छ र कस्तो लाभ एक रक्त दान मा राख्नु छन्?
रूस को आधुनिक अर्थतन्त्रको सुविधाहरू। भविष्यमा छलाङ
को औंलाहरु, यसको लक्षण, उपचार र रोकथाम विधि को गठिया